အောင်လနိုင်ရင် ခိုင်းချင်တာခိုင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့ ကတိ အတိုင်း လုပ် ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် – Cele News TV
August 1, 2021 100million Articles 0
ပရိသတ်ကြီးရေ…. ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းစွဲ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံး
လေးနဲ့ ခန္ဓာကို ယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက် စားပုံလေးတွေဟာဆိုရင်လ ည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစားလူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး
ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ်တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပြီး ထူးခြားလှပလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်ကပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့် အဝရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားကောက်ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျ ချစ်ခင်နေကြတာလ ည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဖူးပွင့်ခိုင်က အောင်လအန်ဆန်းပွဲမစခင်မှာ အောင်လနိုင်ရင်ခိုင်းချင်တာခိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို
ကတိတစ်ခုပေးလာခဲ့တာပဲဖြဟ်ပါတယ် ။ပွဲအပြီးမှာတော့ အောင်လနိုင်သွားတဲ့အတွက် သူ့ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးရတော့မယ့်အကြောက်းကို ‘မနေ့ကပြောထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ဝက်ကိုတော့ အခုဖြည့်စည်းပေးလိုက်ပါပြီနော်ဆ န် / ကြက်ဥ / ငါးသေတ္တာ
တမျိုးစီကို 100ကျပ် ဖြစ်ကြိုက်တာယူနိင်ပါတယ်Mask တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးHandgel တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးကFree ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖူးနဲ့အတူကုသိုလ်ယူနော်မူဆယ်ဆိုပြီး “သူရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေတင်ပြီ သူမရဲ့ ကတိ တစ်ဝက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်ကြီးရေ…. ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါ တယ်နော်။ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကို ယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက် စားပုံလေးတွေဟာဆိုရင်လ ည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစားလူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ
ဝတ်ဝတ်တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပြီး ထူးခြားလှပလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်ကပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့် အဝရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျချစ်ခင်နေကြတာလ ည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဖူးပွင့်ခိုင်က အောင်လအန်ဆန်းပွဲမစခင်မှာ အောင်လနိုင်ရင်ခိိုင်းချင်တာခိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ကတိတစ်ခုပေးလာခဲ့တာပဲဖြဟ်ပါတယ် ။ပွဲအပြီးမှာတော့ အောင်လနိုင်သွားတဲ့အတွက် သူ့ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးရတော့မယ့်အကြောက်းကို ‘မနေ့ကပြောထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ဝက်ကိုတော့ အခုဖြည့်စည်းပေးလိုက်ပါပြီနော်ဆန် / ကြက်ဥ / ငါးသေတ္တာ /တမျိုးစီကို 100ကျပ် ဖြစ်ကြိုက်တာယူနိင်ပါတယ်Mask တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးHandgel တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးကFree ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖူးနဲ့အတူကုသိုလ်ယူနော်မူဆယ်ဆိုပြီး “သူရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေတင်ပြီ သူမရဲ့ ကတိတစ်ဝက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။klnews